Chekutanga turera yeiyo nyowani Snoopy dzakateedzana dzave kuwanikwa | IPhone nhau
Kune zvakawanda zvakawanda nhau mumavhiki apfuura, zvine chekuita neApple yekumhanyisa vhidhiyo sevhisi, sevhisi iyo mwedzi painofamba, zvirimo zvainoita kuti zviwanikwe kune vese vanyoreri zvakawedzera. Mukupera kwaZvita, Apple yakasvika chibvumirano neDHX Media ku gadzira hunhu zvemukati musiki naCharles M. Schultz.
Pane ese mavara akagadzirwa naSchultz, Snoopy agara ari anonyanya kufarirwa. Nekuda kwekudyidzana uku, Apple iri kugadzira akateedzana anonzi Iyo Snoopy Show, akateedzana anouya kuApple TV + muna Kukadzi 5 ya2021, coronavirus kuburikidza, uye yatinogona kutonakidzwa neyekutanga tirera, tirera inowanikwa pane YouTube peji reApple TV +.
Mukutsanangurwa kwevhidhiyo iyo Apple yakatumira pane yayo YouTube chiteshi, tinogona kuverenga:
Kutenderera kweanodiwa makore makumi mashanu-ekutanga Peanuts, kunouya Iyo Snoopy Show, nyeredzi shamwari yedu yekare Snoopy uye shamwari yake yepamoyo, Woodstock. Snoopy imbwa isina imwe. Zvinogona kutaridza senge inofara, inoda-pfupa hound iyo inotarisira dzimba dzevaridzi, asi zvakanyanya kupfuura izvozvo.
Iye zvakare ndiJoe Cool, mwana ane hippest muchikoro, anoshamisa Mambo wekusevha, uye mutambi ane mukurumbira wewrestling, Masked Marvel. Paunenge uchifarira zvaunofungidzira, unogona kuve weHondo Yenyika I mutyairi achirwa neRed Baron kana anoshinga muchadenga anomhara pamwedzi.
Snoopy imbwa yeBeagle ine fungidziro inoshingairira izere nevatambi vanonakidza.
SeSnoopy Show inorova Apple TV +, kana iwe uchida iyi imbwa inosetsa, unogona kunakirwa Snoopy mu Space, 12-episode akateedzana anowanikwa paApple TV +, umo Snoopy anozadzisa shuviro yake yekuve NASA astronaut, achifamba International Space Station achiperekedzwa naCarlitos pamwe neiyo yose Peanuts skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Chekutanga tirera yeiyo nyowani Snoopy dzakateedzana dzave kuwanikwa
Apple inovandudza kumeso mask emoji muIOS 14.2 beta